[21 / 02 / 2020] KKTC’nin Yerli Otomobili Günsel B9 Tanıtıldı	90 TRNC
Maalinta: Ogast 30, 2019
İZBAN 9 Sano Jir 'Waxay Qaadanaysaa Rakaab Siday Yahiin Dadka Reer Yurub'
9 waa laf dhabarta gaadiidka İzmir, oo sidda ugu badan ee rakaabka reer Yurub ah sanadkii, halka si joogto ah loo wanaajiyo tirada baabuur-wadashada, rakaabka iyo saldhigyada iyo sidoo kale dhererka xariiqa. Magaalada ugu weyn ee leh xiriirinta garoonka diyaaradaha ee wadankeena [More ...]
Wadashaqaynta Dalxiiska Deegaanka u dhexeeya Erzurum iyo Bansko
Uu Erzurum in tusaale ahaan muujiyay hay'adaha degmada Turkey ee la maalgelinta deegaanka, hab maamulka deegaanka, markan u socday waaxda dalxiiska. Waxaa diyaariyay Dawlada Hoose ee Magaalaga (Metropolitan Municipal) waxaana maal galiyay Midowga Yurub (IPA II) [More ...]
Tüpraş waxay ka dhoofisaa Locomo ujeeddooyin Shirkadda Swiss Stadler! .. Miyaanay jirin Miisaaniyadda Qaranka isku-dhafka ah?
Tupras, ganacsi ee ugu wayn dalka Turkiga ee warshadaha, Stadler Swiss ah, 7 Total Saxeexeen Heshiis ku saabsan iibka ah ee nooca tareen EURODUAL. Waa wax laga xumaado inay soo saaraan waddankayga. Si kastaba ha noqotee, goobahan loo adeegsaday warshadda Eskişehir Tülomsaş [More ...]
Gawaarida Nidaamka Tareenka ee Dalka iyo Qaranka
Durmazlar Gawaarida Mashiinka Cagaaran ee 60 Green City Light Light oo ay soo saartay Bursa kuna adeegta Degmadda Bursa, Bozankaya 31 xabbadood oo tareenka Sums qaran ah oo ay soo saartay Kayseri kuna adeegeyso Kayseri, Durmazlar by [More ...]
Soo Qaado Qalabkaaga Labaad
Diyaarinta ololeyaal kala duwan oo loogu talagalay soo-saareyaasha doonaya inay beddelaan mashiinnada jira, Emektar Makina, iyada oo aan loo eegin moodada iyo astaanta iyada oo aan loo eegin iibsashada mashiinnada gacan labaadka ah halkii ay ka beddeli lahaayeen bisillada cusub ee 18. [More ...]
Mashruuca Wadada Mardin Midyat wuxuu noqon doonaa mid jilicsan sida ugu dhaqsaha badan
Kadib Turhan wuxuu booqday gudoomiyaha Mazıdağı, Madaxweynaha Istaraatiijiyadda iyo Miisaaniyadda Naci Ağbal iyo Duqa Midyat Veysi Şahin. [More ...]
Gaadiidka u dhexeeya Gördes iyo Demirci waxay noqon doonaan kuwa raaxo badan
Degmada Manisa Metropolitan District Gördes waxay jeceshahay xaafada 8 kiiloomitir inta udhaxeysa xaafada Bardakci degmada Demirci 1. sagxadda sagxadda dhulka ayaa la fuliyay. Tani waxay ka dhigeysaa gaadiidku mid aad u deggan oo aamin ah [More ...]
Nadiifinta Joojinta Rakaabaka Sakarya
Waaxda Gaadiidka ee Dawladda Hoose ee Magaalada Sakarya iyada oo joogsiyo kaladuwan lagu hayo dayactirka magaalada, shaqada dayactirka iyo nadaafadda ayaa wali socota. Qeybta Gaadiidka ee Dowlada Hoose ee Sakarya qeybaheeda kala duwan [More ...]
Baarkinka Labaad wuxuu xallin doonaa Dhibaatooyinka Baarkinka ee Ormanya
Beerta Dabiiciga ah ee Dabiiciga ah, oo lagu soo dhoweeyo marti-sharaf badan oo ka kala socota gobollada deriska ah ee Kocaeli iyo dibedda, ayaa soo jiidata xiisaha weyn ee dadka ka fog diiqadda oo doonaya inay waqti ku qaataan dabiicadda. Midnimo maalmeedka booqdayaasha [More ...]
Tareenka Steam ee Balıkesir
Saldhigga Tareenka ee Balıkesir bishii Maajo ee la soo dhaafay, wuxuu si deggan u kireysanaa degmada Yunus Emre ee Manisa ka dibna wuxuu falcelin weyn ka keenay tareenka dhulka uumiga ah wuxuu mar kale yimid Balikesir. Yunus Emre oo ka mid ah tareenka dhulka ku yaal ee Balikesir [More ...]
Tigidhada YHT | Tigidhada Tareenka Xawaaraha Sare: Boos celinta Xawaaraha Xawaaraha Sare: waxaa lagu sameyn karaa taleefanka. Laakiin haddii aad ka fiirsaneyso inaad ballansato booska, waxaad u baahan tahay xubinnimo. Xubinnimada waxaa looga baahan yahay inay buuxiso TCDD - Internet - Foomka Ikhtiyaariga ee Shaashadda Diiwaangelinta. [More ...]
30 Agoosto Guul Farxad Leh!
Maalinta Guusha ee 30 1924 ayaa u dabbaaldegtay si xamaasad leh oo umada umada. Marka, maxaa ku dhacay 30 bishii Agoosto 1922? Waa tan sheekada Guusha ugu muhiimsan ee taariikhda Turkiga… [More ...]
Jadwalka Tareenka Rakaabka TCDD iyo TCDD Tareenka
Jadwalka Tareenka Rakaabka TCDD iyo TCDD Tareenka: EYBIS (tigidhada e-tigidhada) halkaas oo aad ku arki karto qiimaha tikidhada tareenka TCDD, weydiiso qiimaha tikidhada tareenka, waxaadna ku iibsataa tikidhada tareenka onlayn. Tareenka Xawaaraha Sare [More ...]
Ankara Eskişehir Jadwalka Tacliinta Sare ee Tareenka iyo Jadwalka
Qiimaha Tigidhada Xawaaraha Sare ee Ankara Eskişehir Waqtiga iyo saacadaha: Ankara Eskişehir Tareenka Xawaaraha Sare Eskişehir İstanbul waa mid kamid ah istaagida khadka Ankara. Ankara Eskisehir tareenka xawaare sare ku socda [More ...]